Matihanina hydraulic Floor Jack mpanamboatra | EPONT Jack
Ity vokatra ity dia nahatohitra ny fitsapana ny ekipa QC matihanina sy ny antoko fahatelo manana fahefana.
dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana nandritra ny taona maro.
Ny vokatra dia hypoallergenic ary noho izany dia manalefaka ny hoditra, mampihena be ny mety hisian'ny fanehoan-kevitra ratsy.
EPONT Mpanamboatra trano vy matihanina matihanina, manana tsipika famokarana 4 sy tsipika famokarana hafanana 2 izahay, ny tavoahangy tavoahangy indray andro dia mety hamokatra 5000pcs eo ho eo, momba ny jack gorodona mety hamokatra 500pcs.
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2006. Any afovoan-tanànan'i Yangtze delta ara-toekarena, Jiaxing, izay akaikin'i Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou tanàna, sns, izay tena mety amin'ny fitaterana. Ny orinasa dia famoriam-bola isan-karazany Engine Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack izay orinasa manokana ho an'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana sy ny varotra. Ny orinasa dia mandrakotra faritra 17000 metatra toradroa, ny orinasa dia maka "Reputation mifototra, kalitao voalohany" filozofia fandraharahana, mba hanome mpanjifa amin'ny vokatra tsara, tsikelikely, ny fametrahana ny laza tsara eo amin'ny orinasa, orinasa mitombo. YIPENG minoa miaraka amin'ny fiarahanao, hisy rahampitso tsaratsara kokoa, minoa YIPENG, fidio YIPENG, midira YIPENG, homenay anao ny serivisy sy antoka tsara indrindra. Epont mekanika dia fitambaran'ny Engine Crane isan-karazany, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack izay orinasa manokana ho an'ny fikarohana, Fampandrosoana, Famokarana ary ny varotra.1. MANANA NY FEPETRA: Manana taratasy fanamarinana ara-dalàna izahay2. TECHNOLOGY MANUFACTURING: Fikarohana sy fanavaozana mitohy3. FAHAFAHAMAM-PANJAKANA: Manome vokatra mahafa-po.